Iwu nke Ọrụ
Paxful Inc. IWU NKE ỌRỤGA
Ụbọchị ọ ga adị ire: March 4, 2021
NKWEKỌRỊTA A NWERE EZIGBO OZI DỊ MKPA GBASARA IKIKE GỊ NA ỌRỤ GỊ, MA ỌNỌDỤGA, ÓKÈ NA MWEPỤGA NWERE IKE ỊBARA GỊ URU. BIKO GỤỌ YA NKE ỌMA.
Usoro Ọrụ ndị a na mmezigharịga na nrụzigharịga ọbụla (Nkwekọrịta") na-emepụta nkwekọrịta iwu na-ekpuchi ndokwa nke ọrụ sitere n'aka Paxful nye gị, gụnyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa n'ụlọahịa iji nyere ndị Ọzụụ na Òreè "Ihe onwunwe Dijitalụga"(Okwu dị etú ahụ ka a ga-aghọta nke ọma ịgụnye ego dijitalụ dịka Bitcoin, Tether na ndị ọzọ, nke obereakpaego Paxful na-akwado) iji na-emekọrịta n'azụmahịaga (“Ụlọahịa”),ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa na-enye onyinye ọrụ obereakpaego dijitalụ, na-ejide ma na-atọhapụ Ihe onwunwe Dijitalụ dịka a gwara gị mgbe emechara nzụta nke Ihe Onwunwe Dijitalụ na ọrụ ọbụla ọzọ akọwapụtara na Nkwekọrịta a (mkpokọta"Ọrụga" na n'otu n'otu, "Ọrụ”) nke Paxful, Inc. na ndị mmekọ ya niile nyere, gụnyere mana enweghi oke na Paxful AMERỊKA, Inc.(n’otu,“Paxful”maọbụ“anyị”Maọbụ“ anyị ”maọbụ“ ụlọọrụ”) gị dịka onye (akpọkwara dịka “ onyeọrụ”maọbụ “anyị”). Paxful.com na Ọrụ ya metụtara ya bụ nke Paxful nwere ma na-arụ ọrụ. Otu ọrụ a ga-achịkwa nkwekọrịta a, ya na Iwu nzuzo anyị , Iwu Kuki , na Banye-E Nkwenye.
USORO NDỊ A CHỌRỌ IJI ỌRỤ NKE ỊKWỤ ỤGWỌ IJI DOZIE ESEMOKWU KARỊA IKPE IKPE MAỌBỤ OMUME.
Site na ịbanye iji akaụntụ site na paxful.com, maọbụ webụsaịtị ọbụla metụtara, API, maọbụ ngwa mkpanaka, gụnyere URL ọbụla nke Paxful ji arụ ọrụ (mkpokọta "Webụsaịt Paxful " maọbụ " Webụsaịtị ”), ị kwenyere na ị gụọla ma jiri nlezianya gụọ, ghọta, ma nabata usoro na ọnọdụ niile dị na nkwekọrịta a gụnyere anyị amụma nzuzo , < a href ="https://paxful.com/ig/cookie-policy"> Iwu kuki , na Nkwenye E-Sign.
URU IHE ONWUNWE DIJITALỤ NWERE IKE GBAGOO MAỌBU GBADAA MA NWEE ỌGHỌM NA Ị GA-EMEFU EGO ỊZỤ, IRE, IJIDE, MAỌBU ITINYE EGO NA IHE ONWUNWE DIJITALỤ. Ị GA-AGBA MBỌ HỤ MA ỊZỤ MAỌBỤ IJIDE IHE ONWUNWE DIJITALỤ ỌDỊRỊ GỊ MFE UGBU A N'IHI ỌNỌDỤ EGO Ị NỌ NA YA.
Banyere Paxful na Ọrụ ya
Paxful bụ ụzọ ebeahịa isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ iji kwado ịzụ na ire Ihe Onwunwe Dijitalụ ya na ndị na-ere ahịa na- anabata ụzọ ịkwụ ụgwọ karịrị 300 n’ime mgbanwe nke Ihe Onwunwe Dijitalụ ha. A na-ahụonụ ahịa ịkwụ ụgwọ ma gbanwee n'etiti isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ na ndị na-azụ ahịa n'Ahịa ("Ọzụụ") na ndị na-ere ahịa n'Ahịa ("Òreè"). Ndị ọrụ anyị kwenyere n'usoro ịkwụ ụgwọ iji mezue azụmahịa ma bụrụ ndị zụrụ oke ma sie ike maka iji usoro ịkwụ ụgwọ dị otú a n'ụzọ ziri ezi.
Paxful na-enyekwa ọrụ obere akpaego dijitalụ akwadoro site n'ihe onwunwe obere akpaego dijitalụ zuru ụwa ọnụ. Ndị ọrụ anyị zuru ụwa ọnụ nwere ike ịkwado ebumnobi ọzụzụ na orire ahịa iji zụta maọbụ ree Ihe onwunwe Dijitalụ n'ọtụtụ ụzọ dị mma. Onye mara ámụ̀mà nke ebumnobi ọzụzụ na orire ahịa ahụ bụ ya ka ọdị n'aka ịdepụta usoro nke azụmahịa ahụ, gụnyere usoro ịkwụ ụgwọ nke Onye Ahịa ahụ ga-anabata. Ozugbo onye ọrụ Paxful ọzọ họpụtara ebumnobi ọzụzu na orire ahịa, Onye Ahịa nke Ihe onwunwe Dijitalụ na-ekpochi dịka akụkụ nke usoro azụmahịa anyị (nke anyị na-akpọ "Paxful Escrow") ruo mgbe ọnọdụ niile dị mkpa iji mezuo azụmahịa ahụ gara. Ọrịre ahụ zuru òkè ma mepee Ihe onwunwe Dijitalụ na-emeghe ya ma hapụ ya onye na-azụ ahịa ozugbo Onye zụrụ ahịa mechara usoro nke azụmahịa na ịkwụ ụgwọ gosipụtara nke ọma ma nata ya. PAXFUL ANAGHỊ ARỤ ỌRỤ DỊKA ONYE NA-AKWỤ ỤGWỌ. IKIKE NIILE MAKA IZIPỤ NA ỊNATA ỤGWỌ NA NKWENYE NKE IZI EZI AZỤMAHỊA NA-ADỊ N'ETITI ỌZỤỤ NA ÒREÈ. A na-ahapụrịrị Ihe Onwunwe Dijitalụ ndị anyị kpọchiri azụ n'aka òreè maọbụrụ na ọzụụ chọrọ ịhọrọ ịkagbu azụmahịa ahụ. Òreè nwere ike ọgaghị akwụsị azụmahịa ahụ n'oge ahụ. Onye na-ere ahia naanị nwere nhọrọ ịkpọghee Ihe Onwunwe Dijitalụ ma hapụrụ ya onye ọzụụ. Nke a bụ maka nchekwa nke ọzụụ Ọ bụrụ na òreè chọrọ ịkagbu azụmahịa ahụ n'ihi na ọzụụ esoghị usoro nke azụmahịa ahụ, ha ga-ebido esemokwu ma nyekwa ihe kpatara ịme ya dịka akọwapụtara na Nkebi nke 8 nke nkwekọrịta a. A na-emekọrịta azụmahịa na Webụsaịtị anyị n'etiti ọzụụ na òreè. Dika odi, Paxful adịghị na azụmahịa ahu.
Ọrụ ego dijitalụ akwadoro nke Paxful nyere bụ usoro echekwara maka ịchekwa, izipu, na ịnata ego dijitalụ. Paxful anaghị echekwa maọbụ jide Ihe Onwunwe Dijitalụ ọbụla. A na-echekwa Ihe onwunwe Dijitalụ ọbụla na netwọọkụ maọbụ ngọ̀ngọ̀ nke ya. Azụmahịa ego dijitalụ niile na-eme n'ime netwọọkụ ego dijitalụ, ọbụghị na Paxful. Enweghị nkwa ọbụla na azụmahịa ahụ ga-arụ ọrụ na netwọọkụ ego dijitalụ. Paxful nwere ikike ịjụ ịhazi azụmahịa ọbụla maọbụrụ na iwu achọrọ maọbụ ọ bụrụ na anyị chere na azụmahịa ahụ megidere usoro na ọnọdụ anyị na Nkwekọrịta a. Ị nabatara ma kweta na ị na-ewere ọrụ zuru oke maka mmemme niile na-eme n’okpuru obereakpa gị ma nabata ihe egwu niile nke ịnweta ikike maọbụ ikike n’obere obereakpa gị, oke kachasị ka iwu kwere.
Anyị nwere ikike imegharị, gbanwee, hazie maọbụ mezigharịa nkwekọrịta a oge ọbụla, naanị ike anyị na ezi uche na enweghị ọkwa. Mgbanwe ọbụla dị otú ahụ gbasara ojiji nke Ọrụ ndị a ga-adị ire mgbe ezigara ya na Webụsaịtị Paxful ma ọbụghị ka ọ laghachi azụ. Ọ bụrụ na ị nyere anyị adreesị imeelu, anyị nwekwara ike ịgwa gị site na imeelu na edegharịrị Nkwekọrịta ahụ. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na usoro nke nkwekọrịta a emezigharịrị, naanị ihe ga-eme ka ị kwụsị iji Ọrụ ahụ wee mechie akaụntụ gị.
Ọ bụ ọrụ gị ịgụ Nkwekọrịta ahụ nke ọma ma na-atụle ya oge ọbụla edepụtara ya na Webụsaịtị Paxful. Gị ịnọgide na-eji Ọrụ ahụ eme ihe ga-egosi nnabata ịnwere nye nkwekọrịta nke ugbu a.
Ịhapụ maọbụ igbu oge site na Paxful na ịmanye maọbụ na-etinye mmeju nke ndokwa ọbụla nke Nkwekọrịta ahụ ka agaghị ewere dịka ịkwụsị ikike ọbụla maọbụ ọgwụgwọ anyị.
NDEBANYE & AKAỤNTỤ
Iji ha rụ Ọrụ ndị ahụ, ị ga-edebanye akaụntụ site na Webụsaịtị anyị. N'oge usoro ndebanye aha, anyị ga-ajụ gị maka ụfọdụ ozi, gụnyere ma enweghe oke, aha gị, adreesị gị na ozi nkeonwe ndị ọzọ iji nyochaa njirimara gị. Anyị nwere ike, naanị otu ike anyị zuru oke, jụ ịmebe akaụntụ maka gị. Ị nabatara ma kweta na gị: (a) tozuru ogo nhaala na mpaghara gị iji kwenye na nkwekọrịta a; na (b) kwụsịtụrụ maọbụ wepu ya n'iji Ọrụ anyị.
Site na iji akaụntụ gị, ị kwenyere ma gosipụta na ị ga-eji Ọrụ anyị maka onwe gị ya na ị nwere ike ghara iji akaụntụ gị mee ihe dị ka onye nnọnetiti maọbụ òreè maka ndị ọzọ, mmadụ maọbụ ihe ọbụla ọzọ. Ọ gwụla ma Paxful nyere ikikere ikike, a na-ahapụ gị ka ị nwee otu akaụntụ ma anaghị ekwe ka ị ree, gbaziri, kesaa maọbụ na-enweghị ike ị nweta akaụntụ gị maọbụ nkọwa ọbụla dị mkpa iji nweta akaụntụ gị nye ndị mmadụ maọbụ ndị ọzọ na-abụghị onwe gị. sọ naanị gị nwere ike ijikwa ahaonyeọrụ, adreesị imeelu, passwọọdụ, koodu nyocha ihu abụọ maọbụ koodu ọ bụla maọbụ nzere ị na-eji iji nweta Ọrụ ahụ. Akaụntụ gị agaghị enwe ozi nduhie maọbụ nke nduhie. edmepụta ozi ụgha maka akaụntụ gị, ịgha ụgha obodo gị maọbụ ịnye akwụkwọ njirimara wayo amachibidoro.
N'oge ndebanye aha nke akaụntụ gị, i kwenyere ịnye anyị ozi anyị rịọrọ maka ebumnuche nke nyocha njirimara na nchọpụta nke ibupu ego n'ụzọ iwu akwadoghị, ịkwụ ndịomekome ụgwọ, wayo, maọbụ mpụ ego ọbụla ọzọ ma nye anyị ohere idekọ ma debe ụdị ozi a . Ikwesiri ka i mezue usoro nkwenye ụfọdụ tupu enye gị ikike iji Ọrụ ndị ahụ, usoro nwere ike gbanwee n'ihi ozi anakọtara gbasara gị na-aga n'ihu. Ozi anyị na-arịọ nwere ike ịgụnye ụfọdụ ozi nkeonwe, gụnyere, mana enweghị ókè na, aha gị, adreesị, akara ekwentị, adreesị imeelu, ụbọchị ọmụmụ, nọmba nchekwa ọha, nọmba njirimara onye na-atụ ụtụisi, na njirimara gọọmentị. N'inye anyị nke a maọbụ ozi ọbụla ọzọ enwere ike ịchọ, ị kwadoro na ozi ahụ niile bụ eziokwu, zie ezi na-adịghị eduhie. I kwenyere ozugbo ime ka anyị mara maọbụrụ na ozi ọbụla i nyere gbanwere.I NYERE ANYỊ IKIKERE KA ANYỊ JỤỌ AJỤJỤ, MAỌBỤ N'ỤZỌ ZIRI EZI MAỌBỤ SITE NA ÒTÙ NKE ATỌ, NA ANYỊ KWESIRI ỊTỤLE NJIRIMARA GỊ MAỌBỤ CHEBE GỊ NA /MAỌBỤ ANYỊ GHARA ỊDABA N'AKA NDỊ NA-EME MPỤ EGO, MA MEE IHE SITE NA NCHỌPỤTA ANYỊ NWETARA. MGBE ANYỊ MECHARA ỊJỤ ASE A, Ị GA-EKWETA NA OZI KEONWE GỊ BỤ NKE ENWERE IKE INYE ỤLỌỌRỤ NA-AHỤ MAKA INYOCHA MPỤ MA ỤLỌỌRỤ NA AHỤ MAKA MPỤEGO GA-AZA AJỤJỤ ANYỊ N'UJU.
Ọ bụrụ na ị na-eji Ọrụ ahụ n'aha ụlọọrụ iwu kwadoro dị ka ụlọọrụ, ị na-anọchi anya ma nye ikike na: (i) ụlọọrụ iwu ahaziri nke ọma ma dị adị n'okpuru iwu dị mkpa nke ikike nke nzukọ ya; na (ii) ikike dị otu a nyere gị ka ọ rụọ ọrụ n'aha ya. Akaụntụ ụlọọrụ gosipụtara na ụlọọrụ iwu kwadoro maọbụ naanị onye debanyere aha ya nwere ike iji ya. Anaghị ekwe ka ndị ọzọ maọbụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe ndekọ ego. A na-ekwe ka akaụntụ ụlọọrụ ndị a kwadoro na-akwụ ụgwọ ndị a:
Akaụntụ ụlọọrụ akwadoro nwere ike ịnwe ọtụtụ akaụntụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'oge ọbụla, ọ bụrụhaala na ụlọọrụ niile gosipụtara ma rụọ ọrụ site n'aka ndị ọrụ ahọpụtara nke ụlọ ọrụ ndị Paxful gosipụtara na nke enyere ya aka na nghọta zuru oke;
Akaụntụ ụlọọrụ nwere ike ịnwe naanị otu ọrụ na-arụ ọrụ maka azụmahịa akọwapụtara n'oge ọ bụla ma ekweghị ka ha nwee ọtụtụ ebumnuche ọzụzụ na orire ahịa maka ụdị azụmahịa a sitere na akaụntụ ụlọọrụ ndị ọzọ.
Naanị gị ka ọdịịrị imepụta passwọọdụ na ijikwa nchedo zuru oke na njikwa nke ID niile, passwọọdụ, nkọwa, nọmba njirimara onwe (PIN), API maọbụ koodu ọ bụla ị na-eji enweta Ọrụ anyị.Ofufu ọbụla maọbụ nkwenye nke ozi ahụ dị n'elu na / maọbụ ozi nkeonwe gị nwere ike ime ka ndị ọzọ nweta ohere na-enweghị ikike na akaụntụ gị na ofufu maọbụ izu ohi nke Ihe onwunwe Dijitalụ na/maọbụ ego metụtara na akaụntụ gị, gụnyere usoro ịkwụ ụgwọ ejikọtara gị. Na-ahụta naanị maka idebe adreesị imeelu gị, akara ekwentị na nkọwa kọntaktị ndị ọzọ na akaụntụ profaịlụ gị iji nweta ọkwa maọbụ ọkwa ọbụla anyị nwere ike iziga gị. Ikwesighi ikwe ka ohere dịpụrụ adịpụ maọbụ kerịta ihuenyo kọmputa gị na onye ọzọ mgbe ị banyere na akaụntụ gị. Anyị anaghị ewere ọrụ ọbụla maka ofufu ọbụla ị nwere ike ịkwagide n'ihi nkwenye nke nzere nbanye akaụntụ n'ihi enweghị mmebi nke Paxful na/ ma ọ bụ ọdịda gị ịgbaso maọbụ mee ihe ngosi maọbụ ọkwa ọbụla anyị nwere ike izigara gị.
Iji jiri Ọrụ anyị rụọ ọrụ, ọ ga-adị mkpa ka ị mezuo iwu ụfọdụ dị na obodo gị na / maọbụ obodo obibi gị. Site ikwere usoro ndị a na Nkwekọrịta a, ị kwadoro na ị tụlere iwu na ụkpụrụ mpaghara gị ya na na ị maara, ma mezuo, iwu ọbụla na ụdị ọrụ a. N'ihi amachibidoro iwu maọbụ usoro iwu, anyị anaghị enye ebumnuche ọzụzụ na orire ahịa nke Ọrụ anyị na mpaghara ụfọdụ. Site n'kwere usoro ndị a na nkwekọrịta a, ị na-akwado na ịbụghị onye bi maọbụ na-achịkwa iwu na ụkpụrụ nke ikike ndị ahụ.
Anyị nwere ike ghara ime Ọrụ niile dị na ahịa na ikike niile ma nwee ike machibido ma ọ bụ gbochie iji ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke Ọrụ ndị ahụ site na ụfọdụ ikike ("Iwu Amachibidoro"). N'oge a, Iwu Amachibidoro gụnyere ndị akọwapụtara na "Ndepụta Mba nke Ndị Amachibidoro ”, na Steti nke Washington na New York. Na mgbakwunye, Ọrụ ndị ahụ adịghị maka ego dijitalụ, Tether (USDT), maka ndị ọrụ bi na steeti Texas. Ị gaghị anwa iji Ọrụ anyị ma ọ bụrụ na ịnọ n'ụfọdụ ikike ndị Iwu Amachibidoro. Ị gaghị anwa igbochi mgbochi ọ bụla etinyere site na Ọrụ ndị ahụ, dị ka site na ikpuchi adreesị IP gị ma ọ bụ nyefee ozi ọ bụla na ezighi ezi banyere ọnọdụ gị.
IKIKE ỌCHỊCHỊ, IKPE & IKEWAPỤ
Nkwekọrịta a na ịrụ ọrụ na Webụsaịt na Ọrụ ga-achịkwa ma kọwaa ya na steeti Delaware, na-enweghị ụkpụrụ nke esemokwu n'iwu.
Ikpe. Gị na Paxful kwekọrịtara na esemokwu ọbụla ga-esite maọbụ metụtara nkwekọrịta a maọbụ Ọrụ ndị a, ga-emecha kpebie ikpe mkpegbu, n'otu n'otu, dabere na iwu America Arbitration Association maka ikpezi esemokwu metụtara ndị ahịa (enwere ike ịnweta na https://www.adr.org/rules). N'okpuru usoro iwu achọrọ, ndị na-azọrọ ahịa (ndị ahịa ha maka ndị mmadụ, ezinụlọ, maọbụ nke ezinụlọ ji eme ihe) nwere ike ịhọrọ ịchụso ihe ha kwuru n'ụlọ ikpe obere ụlọ ha na-ekwu kama ịdabere na mkpezi ikpe ọ bụrụhaala na okwu ha ka dị n'obere ụlọ ikpe ma gaa naanị na otu onye (na-abụghị klaasị maọbụ onye na-abụghị onye nnọchianya).
KAGBUO IHE OMỤMỤ: RUO N'ÓKÈ EKWETARA SITE NA IWU, IHE NIILE AZỌRỌ ga-ADABERE NAANỊ N'ONYE NDABERE, NA ABỤGHỊ KA ONYE GBARA AKWỤKWỌ MAỌBỤ OTU ÒTÙ NA IHE ỌBỤLA KLASỊ KWURU, MKPOKỌTA ỌRỤ, MAỌBỤ ONYE NNỌCHIANYA NA-AGANIHU (NA MKPOKỌTA "KAGBUO IHE ỌMỤMỤ"). ONYE NA-EKPE IKPE AHỤ NWERE IKE ỌGAGHỊ AKWADO IHE KARỊRỊ OTU ONYE NA-EKWU MAỌBỤ TINYE AKA NA KLASỊ ỌBỤLA. I KWENYERE NA, SITE N'IKWENYE N'USORO NDỊ A, GỊ NA PAXFUL NA-AGBACHAPỤ IKIKE ỌBỤLA ỊNWALE IKPE SITE N'AKA NDỊ ỌKAIWU MA Ị NA-AGBACHAPỤ IKIKE ISONYE NA KLASỊ IMEGIDE PAXFUL.
Iwu Mkpebi nke Etiti, 9 U.S.C. §§ 1-16, n'ụzọ zuru ezu metụtara mkpezi ikpe. A ga-ekpezi ikpe ahụ site n'aka otu onye mkpezi ikpe na-anọpụ iche ma ga-ewere ọnọdụ na steeti Delaware, maọbụ ọnọdụ ọzọ ekwenyere na ya, n'asụsụ Bekee. Onye ọkaikpe nwere ike inye enyemaka ọbụla nke ụlọikpe nwere ikike nwere ike inye, gụnyere ụgwọ ndị ọkaiwu mgbe iwu nyere ikike, ya na aga-abanye mkpebi mkpezi dị ka ikpe ma kwado ya n'ụlọikpe ọbụla. Mgbe ị rịọrọ, enwere ike ịme okwu na ihu na ihu maọbụ site na-ekwentị ma onye na-ekpe ikpe nwere ike ịnye maka ịnyefe na ịchọpụta mmegharị na obere nkọwa, na-enweghị ikpe ọnụ. Òtù na-agbasokarị na omume ọbụla maọbụ na-aga n'ihu iji mezuo nkwekọrịta a ga-enwe ụgwọ n'ụgwọ ndị ọkaiwu.
Ọ bụrụ na onye na-ekpebiri(s) gị ikpe maọbụ onye mkpezi ikpe ga - ebo gị ụgwọ ịgba akwụkwọ maọbụ ụgwọ ọrụ ndị ọzọ, anyị ga-akwụghachi gị ụgwọ, mgbe ị rịọrọ, ka ego maọbụ ụgwọ dị otu a ga-aka karịa nke ị ga-akwụrịrị maọbụrụ na ịga n'ihu kama ịnọ n’ụlọikpe. Anyị ga-akwụkwa ụgwọ ndị ọzọ maọbụ ụgwọ ọbụla maọbụrụ na achọrọ ka anyị mee ya site na iwu onye nchịkwa ikpe maọbụ iwu dị. Ewezuga ihe ndị a e kwuru, otu ọbụla ga-ahụ maka ụgwọ maọbụ ụgwọ ọbụla ọzọ, dịka ụgwọ ọkaiwu nke ndị ọzọ nwere ike ibute.
Ọbụrụ n'akụkụ ọbụla nke Nkwekọrịta a bụ onye ọkaikpe ọbụla maọbụ ụlọikpe nke Steeti Amerịka nwere ka ọbụrụ ihe na-abaghị uru maọbụ nke a na-apụghị ịgbagha agbagha maọbụ n'akụkụ ọbụla, agaghị emetụta ndaba maọbụ ịmanye ya na ngalaba ndị ọzọ nke usoro na ọnọdụ a. Isi okwu ọbụla dị na Nkwekọrịta a bụ maka ebumnuche ozi naanị na ọbụghị iwu akwadoro nke Nkwekọrịta a.
IWU NZUZO & NCHEKWA
Anyị na-agba mbọ ime ihe niile ziri ezi iji chekwaba ozi nkeonwe gị. Kaosinadị, anyị enweghị ike ịkwado nchekwa nke datà ọbụla i gosipụtara na ntaneetị. Ị na-anabata ihe egwu dị n'ịnye ozi na ntaneetị ma ọgaghị ejide anyị maka mmebi ọbụla nke nchekwa belụsọ na nke a bụ n'ihi nleghara anya anyị.
Biko lelee nkwupụta nzuzo anyị: https://paxful.com/privacy.
ENWEGHI IKIKE, MMACHI NKE IBU NA MNWERE EGWU
A NA-ENYE ỌRỤ ''DỊKA O SI DI'' NA ''DỊKA Ọ DỊ'' NA-ENWEGHI NKWA ỌBỤLA,NNỌCHITEANYA MAỌBỤ IKIKE,MAỌBỤ NKWUPỤTA, NKE EGOSIPỤTARA MAỌBỤ IWU.RUO OGO KACHASI NKE IWU ENWERE NABATARA,PAXFUL KWỤSỊRỊ IKIKE ỌBỤLA NWERE AHA, AZỤMAHỊA, AHỤIKE MAKA OTU EBUMNUCHE YA NA/ MAỌBỤ MMEBI IWU.PAXFUL EMEGHI ỌNỌCHITEANYA MAỌBỤ AKWUKWỌ IKIKE ỌBỤLA ỊBANYE NA WEBỤSAỊT, AKỤKỤ ỌBỤLA NKE ỌRỤ AHỤ, MAỌBỤ NKE ỌBỤLA N'IME IHE NDI DI NA YA, GA-AGA N'IHU, NA-ENWEGHI NKWỤSỊ, OGE, MAỌBỤ ENWEGHI NJEHIE.ỤTA ADỊGHỊRỊ PAXFUL MAKA OFUFU MAỌBỤ MMEBI ONYEỌRỤ NWERE IKE INWETA. Ị GA-EKWETA MA KWENYE NA ỊDABEREGHỊ NA NKWUPỤTA ỌBỤLA MAỌBỤ NGHỌTA ỌZỌ, MAỌBỤ EDEREDE MAỌBỤ EKWURUNỌNỤ, NA N'IJI NA INWETA ỌRỤ NA WEBỤSAỊT. NA-ENWEGHI ỊMACHI IHE NDỊ A, Ị GA-ENWETA MA NABATA ỌTỤTỤ IHE EGWU GBASARA IJI EGO DIJITALỤ GỤNYERE NA ENWEGI ÓKÈ MMEBI NGWAIKE, NSOGBU NGWANRỌ, ỌDỊDAONYINYEỌKỤ NTANEETI, NTINYEAKA ONYE ATỌ NA-EWETA OFUFU MAỌBỤ OHERE ỊBANYE NA AKAỤNTỤ GỊ MAỌBỤ OBEREAKPAEGO NA DATÀ ONYEỌRỤ NDỊ ỌZỌ, ỌDỊDA SAVA NA OFUFU DATÀ. ỊNABATARA MA KWETA NA PAXFUL AGAGHỊ AHỤ MAKA MMEBI NKWUKỌRỊTA ỌBỤLA, NSOGBU, NJEHIE, MMEGHARỊ MAỌBỤ IGBU OGE I NWERE IKE INWETA MGBE IJI ỌRỤ ANYỊ, N'AGBANYEGHỊ IHE ỌPỤTARA.
ENWEGHI IHE GA-EME KA PAXFUL, NDỊ MGBAKWỤNYE HA NA NDỊ NNYEỌRỤ HA, MAỌBỤ, NDỊ ISI HA, NDỊ NDUZI HA, NDỊ NNỌCHITEANYA, NDỊ ỌRỤ, NDỊ NDỤMỌDỤ, NDỊ NJỤTASE MAỌBỤ NDỊ NNỌCHITEANYA, GA-AKWỤ ỤGWỌ (A) MAKA EGO ỌBỤLA KARỊRỊ URU NKE ỤGWỌ NIILE Ị KWỤRỤ MAKA ỌRỤ AHỤ BỤ IHE KPATARA IHE N'IME ỌNWA IRI NA ABỤỌ (12) TUPU OFUFU SITERE NA MAỌBỤ (B) MAKA URU FURU EFU, MBELATA URU MAỌBỤ OHERE AZỤMAHỊA, OFUFU ỌBỤLA, MMEBI, NRỤRỤAKA MAỌBỤ NGABIGA DATÀ MAỌBỤ IHE ỌBỤLA NGWONGWO NDỊ ỌZỌ A NA-APỤGHỊ ỊHỤ ANYA MAỌBỤ NKE ỌBỤLA PỤRỤ ICHE, NA MBEREDE, NKE NA-APỤTACHAGHỊ IHE, NKE NA-APỤTAGHỊ IHE, MAỌBỤ MMEBI MEBIRI, MA Ọ DABERE NA NKWEKỌRỊTA, MMEKPA AHỤ, NLEGHARA ANYA, IWU SIRI IKE, MAỌBỤ N'ỤZỌ, NA-ESITE MAỌBỤ NA NJIKỌ METỤTARA ỌRỤ NKE SAỊTỊ MAỌBỤ ỌRỤ AHỤ ENWETAGHỊ IKIKE, MAỌBỤ NKWEKỌRỊTA A, ỌBỤRỤGODI NA A DỤRỤ ONYENNỌCHIANYA IKIKE NKE PAXFUL NDỤMỌDỤ MAỌBỤ MARA MAỌBỤ KWESIRI ỊMA MAKA ENWERE IKE MBIBI ỌBỤLA, N'AGBANYENYI ỌDỊDA NKE NKWEKỌRỊTA ỌBỤLA MAỌBỤ USORO ỌZỌ NKE NZUBE YA DỊ MKPA, MA EWEZUGA RUO N'AGBANYEGHI ỌDỊDA NKE NKWEKỌRỊTA ỌBỤLA MAỌBỤ USORO ỌZỌ NKE NZUBE YA DỊ MKPA, MA EWEZUGA RUO N'ÒKÈ NKE MKPEBI IKPE IKPEAZỤ NA MMEBI DỊ ETU AHỤ BỤ OKE NLEGHARA ANYA, AGHỤGHỌ, OMUME RỤRỤ ARỤ MAỌBỤ ỊKPACHARA ANYA MEBIE IWU. ỤFỌDỤ IKIKE ANAGHỊ EKWE KA MWEPỤ MAỌBU MMACHI NKE MMEBI MEBIRI MAỌBỤ NKE NWERE IKE ỊPỤTA, YABỤ MMACHI DỊ N'ELU NWERE IKE ỌGAGHỊ AGBASA GỊ.
Anyị enweghị maọbụ jikwaa usoro ngwanrọ na-achịkwa ọrụ nke Ihe onwunwe Dijitalụ. N'nchịkọta, usoro na-achịkwa ọrụ bụ ihe mepere emepe, onye ọbụla nwere ike iji, detuo, gbanwee ma kesaa ha. Anyị ebughi ọrụ ọbụla maka ọrụ nke usoro nchịkwa ya na anyị enweghị ike ịkwado arụmọrụ maọbụ nchekwa nke arụmọrụ netwọọkụ. Ọkachasị, usoro nwere ike ịdabere na mgbanwe mberede na iwu ọrụ (gụnyere "ndụdụ"). Mgbanwe ụdị ọrụ ọbụla dị etu a nwere ike metụta nnweta, uru, ọrụ, ya na / maọbụ aha ụdị ego dijitalụ a. Paxful anaghị achịkwa oge na atụmatụ nke mgbanwe ndị a na-arụ ọrụ. Ọ bụ ọrụ gị ịme ka gị onwe gị mara maka mgbanwe na-abịanụ ma ị ga-akpachara anya tụlee ozi na ọhaneze dị na ozi nke Paxful nwere ike ịnye iji chọpụta ma ị ga-aga n'ihu na-eji Ọrụ ndị ahụ. N'ihe banyere mgbanwe ọ bụla dị etú ahụ, Paxful nwere ikike ịme usoro ndị a dị ka ọ ga-adị mkpa iji gbochibido nchekwa na ọrụ nchekwa nke platfọm ya, gụnyere ịkwụsị ọrụ nwa oge maka ego dijitalụ gụnyere, na usoro ndị ọzọ dị mkpa. Paxful ga - eji ezi mbọ ya mee ka ị mata ọsịsa ya na mgbanwe ọbụla na - arụ ọrụ; n’agbanyeghi, mgbanwe di etu a adighi anyi n’aka ma nwekwaa ike ime ma Paxful amaghị maka ya. Nzaghachi anyị maka mgbanwe ọbụla na-arụ ọrụ dabere na anyị nwere ezi uche ma gụnyere ikpebi ịghara ịkwado ndụdụ ọ bụla maọbụ omume ndị ọzọ. I kwenyere ma nabata ihe egwu nke mgbanwe arụmọrụ na usoro iwu nke Ihe onwunwe Dijitalụ ma kwenye na ụta adịghịrị Paxful mgbanwe dị etu a ma ọbụghị iwu maka ọghọm ọbụla ị nwere ike ịnweta n'ihi mgbanwe ndị dị na iwu ọrụ. I kwenyere ma kwenye na Paxful nwere ikike iji chọpụta nzaghachi ya na mgbanwe ọbụla na-arụ ọrụ ya na na anyị enweghị ibuọrụ iji nyere gị aka na ego na-akwadoghị ego maọbụ usoro a.
N'iji Ọrụ anyị mere ihe, ị nwere ike ịlele ọdịnaya maọbụ jiri Ọrụ ndị ọzọ nyere, gụnyere njikọ njikọta na weebụsaịtị na ọrụ nke ndị ọzọ ("3rd ọdịnaya nke ndị ọzọ") ). Anyị anaghị akwado, nabata maọbụ na-achịkwa ihe ọbụla 3rd ọdịnaya ma anyị agaghị enwe ọrụ maọbụ ụgwọ maka ụdị 3rd otu ọbụla. Na mgbakwunye, mmeso gị maọbụ leta gị na ndị ọzọ a nọ naanị gị na ndị ọzọ. Anyị enweghị ọrụ maọbụ ụgwọ maka ọnwụ maọbụ mmebi ọbụla dị iche iche kpatara ụdị mmekọrịta ọbụla na ị ghọtara na ọrụ nke ọdịnaya 3rd, ya na mmekọrịta gị na ndị ọzọ, bụ naanị na ihe egwu nke gị.
Maka iwepụ inwe obi abụọ, Paxful anaghị enye ntinyeego, ụtụisi, maọbụ nye ndụmọdụ gbasara iwu. E debanyere aha Paxful n'Ụlọọrụ Nchekwaego na Mgbanwe nke Amerịka ma ọnaghị enye ọrụ nchekwa maọbụ ndụmọdụ itinye ego. A na-eduzi azụmahịa niile site na Ahịa anyị n'usoro Isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ n'etiti Ọ̀reè na Ọzụụ ma ọrụ gị ga-abụ naanị ịhụ ọrụ maka ikpebi ma itinye ego ọbụla, atụmatụ itinye ego maọbụ azụmaahịa metụtara ya dabara adaba maka gị dabere na ebumnuche itinye ego nke onwe gị, ọnọdụ ego na ihe egwu inwere ike ịnabata. I kwesịrị ịkpọtụrụ onye ọka iwu gị maọbụ onye ọrụ ụtụisi gbasara ọnọdụ gị. Site n'oge ruo n'oge, anyị nwere ike ịnye ozi mmụta gbasara platfọm na ngwaahịa anyị, iji nyere ndị ọrụ aka ịmụtakwu banyere Ọrụ anyị. Ozi nwere ike ịgụnye, ma enweghị oke na, ozi blọgụ, isiokwu, njikọ na 3rd ọdịnaya, ndepụta ozi, nkuzi, na vidiyoga. Ozi enyere na webụsaịtị maọbụ saịt ọbụla nke atọ anaghị abụ ndụmọdụ ego, ndụmọdụ ntinyeego, ndụmọdụ azụmaahịa, maọbụ ụdị ndụmọdụ ọbụla ọzọ, ma ị gaghị emeso ọdịnaya nke webụsaịt ọbụla. Tupu ịme mkpebi ịzụta, ire maọbụ jide ihe onwunwe Dijitalụ ọbụla, ị kwesịrị ị na-eduzi ịdị uchu gị ma jụọ ndị ndụmọdụ ego gị tupu ịme mkpebi ego ọbụla. Agaghị ejide Paxful maka mkpebi ị mere ịzụta, ire, maọbụ jide Digital Assets dabere na ozi Paxful nyere.
I kwenyere na anyị anaghị akwụ ụgwọ maka mgbanwe ọbụla ọnụ ahịa n' Ihe Onwunwe Dijitalụ. Ọbụrụ na nsogbu nke ahịa maọbụ ihe omume Force Majeure (dị ka akọwara ya na Nkebi nke 17), anyị nwere ike ịme otu maọbụ karịa n'ime ihe ndị a: (a) kwụsịtụ ịnweta Ọrụ ahụ; maọbụ (b) gbochie gị ịmecha omume ọbụla site na Ọrụ ndị ahụ. Anyị agaghị aza ajụjụ maka ọghọm ọbụla dakwasịrị gị site na omume ndị a. N'isonye n'ụdị ọnọdụ ọbụla, mgbe Ọrụ bidoro ọzọ, i kwenyere na ọnụ ahịa ahịa na-ewu ewu nwere ike ịdị iche na ọnụego dịnụ tupu ọnọdụ ahụ.
Anyị anaghị ekwe nkwa na Webụsaịt, maọbụ sava na-eme ka ọ dị, enweghị nje maọbụ njehie, na ọdịnaya ya ziri ezi, na a gaghị egbochi ya, maọbụ na a ga-edozi ntụpọ ahụ. Anyị agaghị enwe ọrụ maọbụ kwụọ gị ụgwọ maka ụdị ofufu ọbụla, site na ịme ihe, maọbụ ịdabere na ihe, maọbụ ozi, dị na Webụsaịt.
IWU & MGBAPỤTA PAXFUL
Ọ bụrụ na gị na otu onye maọbụ karịa ji Ọrụ anyị arụ nwere esemokwu , ị hapụ Paxful, ndị mmekọ ya na ndị na-enye ọrụ, ya na nke ọbụla maọbụ ndị ọrụ ha dị iche iche, ndị isi, ndị ọrụ, ndị nnọchi anya na ndị nnọchiteanya, site na nkwupụta ọbụla, ọchịchọ na mmebi ọbụla. (nke dị adị na nke bara uru) ụdị ọnatarachi ọbụla na-esite na maọbụ n'ụzọ ọbụla metụtara esemokwu ndị ahụ. I kwenyere ịkwụ ụgwọ ma jide Paxful, ndị mgbakwụnye ya na nke ọbụla maọbụ ndị ọrụ ha dị iche iche, ndị isi, ndịnjụtase, ndị ọrụ na ndị nnọchianya, enweghị mmerụ ọbụla na nkwupụta ọbụla (gụnyere ụgwọ ndị ọka iwu na ụgwọ ọbụla, ụgwọ ma ọ bụ ntaramahụhụ nke ndị nwere ikikere ọbụla nyere. ) na-esite maọbụ metụtara mmebi nke nkwekọrịta a maọbụ mmebi iwu ọbụla, iwu maọbụ iwu, maọbụ ikike nke ndị ọzọ.
AZỤMAHỊA N'ỤLỌAHỊA PAXFUL
Webụsaịtị ahụ na-enye ndị ọrụ ohere ịrịọ maka ịzụta maọbụ ree Ihe onwunwe Dijitalụ.
Mgbe onye ọrụ bidoro azụmahịa maka nzụta maọbụ ọrịre nke Ihe Onwunwe Dijitalụ, a na-emezu azụmahịa ahụ n'ụzọ nkwekọrịta a na usoro ndị ọzọ, ma ọbụrụ na, nke onyeọrụ maọbụ onyeọrụ ibe ya kọwara. Enwere ike ịchọta usoro ntụpụ-azụ n'ịzụ na ire Ihe Onwunwe Dijitalụ n'ỤlọAhịa Paxful na https://paxful.com/support/en-us/categories/360000409494-How-to-Buy-and-Sell.
Usoro izugbe ndị a metụtara azụmahịa ọbụla akọwapụtara n'okpuru:
Ịzụta Ihe onwunwe Dijitalụ site na ịrịọ ebumnobi ọzụzụ na orire ahịa.
Mgbe ị na-azụta Ihe ọnwunwe Dijitalụ n'ỤlọAhịa Paxful:
Enweghị ụgwọ a na-akwụ maka ego edebere ruo na azụchaa ahịa Paxful dịka akụkụ nke azụmahịa nke ndị na-azụ ahịa na-akwụ n'ỤlọAhịa anyị.
Ebumnobi orire na ọzụzụ sitere na Paxful ndị otu ha nwere usoro na ọnọdụ nke ha na ebumnobi orire na ọzụzụ ọ bụla ga-adịgasị iche na ọnụego mgbanwe, mgbanwe ọsọọsọ, ya na usoro na ọnọdụ ndị ọzọ nke ndị òreè ahịa nyere. Site n'ịkwere onye Òreè i kwenyere na ị ga-agbaso usoro na ọnọdụ nke ebumnobi orire na ọzụzụ ahụ. Usoro na ọnọdụ Òreè kwụrụ kpọmkwem na-adaba n'ọnọdụ niile belụsọ mgbe ha megidere maọbụ mebie Nkwekọrịta a, iwu na-akwadoghị, enweghị isi maọbụ na ọ na-esi ike ịgbaso (dị ka mkpebi siri ike na ikike Paxful) maọbụ ma ndị ọrụ nke nkwenye azụmahịa ịgbanwe usoro na ọnọdụ nke ụdị ebumnobi orire na ọzụzụ a. Ọ BỤ ỌRỤ GỊ IJI NLEZIANYA GỤỌ USORO NA ỌNỌDỤ ÒREÈ NA-ENYE MA SORO HA KPỌMKWEM. MA ỌBỤRỤ NA ỊGBASOGHỊ INYE ỌNỌDỤ, AGAGHỊ ANABATA USORO ỊKWỤ ỤGWỌ GỊ. ENYEFELA ỊKWỤ ỤGWỌ EWEZUGA NA ỊGBASORO USORO NA ỌNỌDỤ EZIPỤTARA MAKA EBUMNOBI ORIRE NA ỌZỤZỤ. ỌBỤRỤ NA ỊKWỤỌ ỤGWỌ NA-AGBASOGHI USORO NA ỌNỌDỤ ENYERE, PAXFUL AGAGHỊ ENYERE GỊ AKA NA-ESEMOKWU GA-ADAPỤTA MAKA ỊKWỤGHACHI GỊ EGO GỊ.
Nchọpụtaeziokwu Ọkwụkwụgwọ na inye ntuziaka maka ịkpọghe Ihe onwunwe Dijitalụ si n'aka Ego edebere ruo na azụchaa ahịa Paxful bụ naanị ọrụ dịịrị Òreè ma ọbụghị nke Paxful. Ọbụrụ na Òreè ahapụrụghị gị Iheonwunwe Dijitalụ gị mgbe ịmechara usoro na ọnọdụ iwu orire, zigara ya nsogbu ahụ ozugbo site na bọtịnụ esemokwu akọwapụtara n'ime mkparịtaụka azụmahịa ahụ. Nkwado Paxful ga-enyocha ma dozie esemokwu ahụ. A kọwapụtara usoro mkpebi esemokwu a n'okpuru "Nkebi nke 8 - Mmekọrịta azụmahịa site na Usoro mkpebi esemokwu nke Paxful." Ọbụrụ na ịgbaso usoro mkpebi esemokwu a, Paxful agaghị enwe ike inyere gị aka n'okwu a.
Ire Ihe onwunwe Dijitalụ
Mgbe a na-ere Ihe Onwunwe Dijitalụ na Ụlọahịa Paxful:
Ndị Òreè ga-enyocha maEbumnobi orire na ọzụzụ ahịaEbumnobi orire na ọzụzụ ahịa hazie ọkwụkwụụgwọ ahụ n'oge kwesịrị ekwesị, ya na n'ime oge ụfọdụ dị ka akọwapụtara na usoro iwu banyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa. Ozugbo Ọzụụ nyefere gị ọkwụkwụụgwọ dịka usoro iwu banyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa si dị, ọ bụ ọrụ dịịrị gị inyochaa ma hazie ọkwụkwụụgwọ ahụ wee mepee Ihe Onwunwe Dijitalụ si na Ego edobere ruo na azụchaa ahịa Paxful ma hapụrụ ya Ọzụụ. Ọ bụrụ na ịgbasoghị ntuziaka na ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa, ị gaghị enwe ike ịlaghachi na Ihe onwunwe Dijitalụ gị akpọchiri.
Dịka Òreè ị nabatara ihe egwu niile na ụgwọ maka mmebi ọbụla nke nkwekọrịta a sitere na ire Ihe onwunwe Dijitalụ. Ọ bụ ọru dịịrị ịkwụ ụtụisi niile. Paxful ada gị nha dịka Òreè nke Ihe Onwunwe Dijitalụ maka ịkpọchi Ihe onwunwe Dijitalụ na ego edobere ruo na azụchaa ahịa Paxful edobere maka orire. Belụsọ ma ekpebiri na Paxful ga-eji ekereuche ha, Paxful agaghị akwụghachi Òreè ihe ọbụla omefuru maọbụ n'ihi mmebi nke Nkwekọrịta a,anyị agaghị akwụghachi mpụ maobu aghụghọ emere n'ọnọdụ ọbụla.
Ọkwụkwụụgwọ ọbụla enwetara kwesịrị ka ahazie ya ma kwenye dịka ị natara tupu ịmepe Ihe Onwunwe Dijitalụ sitere na ego edobere ruo na azụchaa ahịa Paxful. Ụta adịghịrị Paxful na mmefu inwetara n'ihi mkpọghe ngwa ngwa Ihe Onwunwe Dijitalụ tupu ọkwụkwụụgwọ ị kwụrụ agazie nke ọma. Ị ga-ege nti ma tinye uche gị na Ọzụụ gị. Ị ga-akwụsị kwụsị ịrụọrụ na ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ọbụla adịghị ire.
A machibidoro mgbasa ozi ọbụla nke webụsaịt gị n'akụkụ ọbụla nke Ụlọahịa Paxful (dịka nkọwaonwe gị, iwu banyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa maọbu mkparịta ụka azụmahịa) nke ga-akwado ịzụ maọbụ ire Ihe onwunwe Dijitalụ na mpụga nke Ọrụ Paxful bụ nke amachibidoro. N'oge olemole, enwere ike ịkekọrịta webụsaịt gị nke emere naanị maka Òreè iji nata ọkwụkwụụgwọ iji mezue azụmahịa ahụ (yabụ ntụkwasị obibi / kaadị njiakwụụgwọ nke onye atọ) na ntuziaka azụmaahịa ahụ; ma ọ bụrụhaala n'iji webụsaịt ndị dị na mpụga a doro anya na usoro iwu banyere ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa enyere ya na ụdị webụsaịt nwere ike ọ gaghị enwe mgbasa ozi ọbụla maọbụ ozi ịkpọtụrụ gị.
Agbakwụnyeghi Paxful na Ọrụ ya maọbụ jikọta ya na, maọbụ kwado ya site na ndị ọzọ, gụnyere ma enweghị oke onye nyere kaadị onynye ọbụla. Akaraazụmahịa edenyere, ụdị, na ihe nchọpụta ndị ọzọ bụ naanị nke ndị nwe ha. Agbakwụnyeghi Paxful na Ọrụ ya, kwado, maọbụ jikọta ya n'ụzọ ọbụla ebe ndi ahụ nwe ya.
Enyeghi Paxful ikikere kaadi onyinye maọbụ onye na-ere kaadị onyinye. Kaadị onyinye ọbụla ịnatara n'aka onyeọrụ ji Ụlọahịa Paxful arụ ọrụ ga-anọriri n'okpuru usoro na ọnọdụ azụmahịa nke onye ahịa nke atọ onye ọ ga-agbapụta ("Onye Na-enye”). Ụta adịghịrị Paxful maka omume maọbụ nkwenye nke Ònyeè ọbụla, maọbụ ụgwọ ọbụla, ụbọchị mmebi, ntaramahụhụ maọbụ usoro na ọnọdụ ndị metụtara kaadị onyinye Oyeè natara site n'iji Ụlọahịa Paxful. Site na ịnata kaadị onyinye n’aka onyeọrụ, i kwenyere na ị gụọla usoro na ọnọdụ kaadị onyinye ahụ, wee nọchite anya Paxful na ị tozuru iji ụdị kaadị onyinye ahụ n’okpuru kaadị onyinye Ònyeè usoro na ọnọdụ, maọbụ n’iwu nabatara ya.
AMACHIRI OMUME EREMERE MAỌBỤ NREGHARỊ NKE KAADỊ ONYINYEGA NA WEBỤSAỊT NA ỤLỌAHỊA ANYỊ. Ị GA-EGOSIRIRI NA Ọ BỤ GỊ NWE KAADỊ ONYINYE AHỤ SITE N'INYE PAXFUL IHE AKAEBE GA-EGOSI NA Ọ BU NKE GỊ MGBE HA GA-ASỊ KA I GOSI IHE AKAEBE NKE KAADỊ ONYINYE GỊ (DỊKA AKWỤKWỌ AZỤMAHỊA)PAXFUL ANAGHỊ EKWU NA HA NỌCHIRI MAỌBỤ NA-EKWE NKWA NA USORO ỌKWỤKWỤỤGWỌ NKE ONYE ATỌ NA WEBỤSAỊT NYERE IKIKE AZỤMAHỊA N'ỌRỤ PAXFUL, MAỌBỤ NA USORO ỌKWỤKWỤỤGWỌ ONYE NKE ATỌ NA WEBỤSAỊT ANYỊ KWADORO MAỌBỤ NA ỌRỤ ANYỊ KWADORO YA. IKWESIGHI IJI ONYE ATỌ DỊ ETU A DỊKA USORO ỌKWỤKWỤỤGWỌ NKE PAXFUL MA ỌBỤRỤNA ONYE ATỌ ABỤGHỊ NKE AKWADORO
Ọ BỤ ỌRỤ DỊỊRỊ GỊ ỊGBASO USORO IWU NA NTỤZIAKA NIILE DỊ NA MPAGHARA EBE AZỤMAHỊA GỊ NA-EWERE ỌNỌDỤ.
Azụmahịa niile ga-eweriri ọnọdụ n'ime Paxful. Amachiri ibupụ azụmahịa na platfọm Paxful maọbụ ịgbanwe nkọwa kọntaktị mpụga.
Mmachi Mbufega. Anyị nwere ike, iji ekereuche anyị, nye mmachi maọbụ mmachi na nhà, ụdị, maọbụ n'ụzọ nke mbufe azụmahịaga ọbụla a chọrọ, dị ka njedebe na mkpokọta Ihe onwunwe Dijitalụ enwere ike izipụ maka ọrịre.
EkweghịNnkwa. Paxful anaghị ekwe gị nkwa na inwere ike ire Ihe onwunwe Dijitalụ gị n'Ụlọahịa ha. emume ịzụ na ire Ihe onwunwe Dijitalụ site n'Ụlọahịa Paxful's anaghị ekwe gị nkwa na ị ga-enwe ike ịzụta maọbụ ree Ihe onwunwe dijitalụ site n'Ụlọahịa n'oge ọzọ.
Mmekọrịta. Enweghị ihe dị na Nkwekọrịta a ga-ezube maọbụ weta mmekọrịta ọbụla, nkwonkwo aka, ụlọọrụ, ndụmọdụ maọbụ onyenlekọta, gị na Paxful ịdị na-asọpụrụ ndị ọrụ nkwekọrịta onwe ha.
Inye Ozi kwụọtọ. Ị na-ekwepụta ma na-egosi na ozi ọbụla ị na-enye site nỌrụ bụ ozi zuru ezu ma kwụrụkwaọtọ. Ị nabatara ma kweta na ụtá adịghịrị Paxful maka njehie maọbụ nleghara anya ọbụla imere metụtara azụmahịa ọbụla ebidoro site na Ọrụ ndị ahụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị degharịa adreesị obereakpaego maọbụ nye ozi ezighi ezi. Anyị na-agba gị ume inyocha nkọwa azụmahịa gị nke ọma tupu izipụ ha site na Ọrụ ndị ahụ.
Enweghị Nkagbu maọbụ Mgbanwe; Ọrụ Obere akpa. Ozugbo ebufere nkọwa azụmahịa na netwọọkụ ego dijitalụ site na Ọrụ ahụ, Paxful enweghị ike inyere gị aka n'ịkagbu maọbụ n'ịgbanwe azụmahịa gị ọzọ. Paxful enweghị ike ịchịkwa netwọọkụ ego dijitalụ ọbụla ma enweghị ikike iji kwado nkagbu ọbụla maọbụ mmegharị arịrịọ ọbụla. Paxful anaghị echekwa maọbụ kpọchie Ihe Onwunwe Dijitalụ ọbụla akpọchiri. A na-edekọ Ahịa Dijitalụ na netwọọkụ ha maọbụ ihe mgbochi. Azụmahịa ego dijitalụ niile na-eme n'ime netwọọkụ ego dijitalụ, ọbụghị na Paxful. Enweghị nkwa ọbụla na azụmahịa ahụ ga-arụ ọrụ na netwọọkụ ego dijitalụ. Paxful nwere ikike ịjụ ịhazi azụmahịa ọbụla ma ọbụrụna iwu achọrọ maọbụ ọbụrụna anyị chere na azụmahịa ahụ megidere usoro na ọnọdụ anyị na Nkwekorita a. Ịnabatara ma kweta na ị na-ewere ọrụ zuru oke maka mmemme niile na-eme n’okpuru Akpaego gị ma nabata ihe egwu niile nke ịnweta Akpaego gị ọbụla enyere ikike n'iwu.
Ụtụisi. Ọ bụ ọrụ gị ịchọpụta ihe, ma ọbụrụ na, ụtụisi ọbụla metụtara azụmahịa nke ị nyefere nkọwa azụmahịa site na Ọrụ ndị ahụ, ọ bụkwa ọrụ gị ịkọ ma kwụọ ụtụisi ziri ezi n'aka ndị ọbụ ọrụ ha ịnakọ ụtụisi kwesịrị ekwesị. Ikwenyere na ụtá adịghịrị Paxful maka ịchọpụta ma ụtụisi ọ metụtara azụmahịa ego dijitalụ gị maọbụ maka ịnakọta, ịkọ akụkọ, igbochi maọbụ ịnyefe ụtụisi ọbụla na-esite na azụmahịa ego dijitalụ ọbụla.
Ugwu Onyeọrụ. Mgbe itinyere aka n'Azụmahịa, anyị na-enye ndịọrụ ndị ọzọ ohere ịnye nzaghachi maka mmekọrịta gị na ha. Anyị na-enyekwa ndịọrụ ohere izite mkpesa ma ọbụrụna ndịọrụ kwenyere na ị mebila Nkwekọrịta a n'ụzọ ọbụla. Mkpesa ndị a bụ ihe nzuzo, ma anyị nwere ike iji ha na esemokwu dị ka akọwara na Nkebi 8
Akụkọ Azụmahịa. Inwere ike ịlele azụmahịa gị siri gaa site na Akaụntụ gị. Ikwenyere na ọdịda nke Ọrụ ahụ inye ụdị nkwenye a agaghị enwe ajọ mbunobi maọbụ mebie usoro nke ụdị azụmahịa a.
Paxful Pay. Paxful nyere ụfọdụ ndị ahịa ikike ịnabata Paxful dị ka usoro ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ngwaahịa na ntaneetị ("Ndị ahịa nwere ikike"). Inwere ike ịkwụ Onyeọzụahịa ụgwọ site n'ịhọpụta “Paxful Pay” nhọrọ na ego maọbụ n'oge ịkwụ ụgwọ. Paxful Pay ga-eduga gị n'ỤlọAhịa anyị iji nweta Ihe Onwunwe Dijitalụ dị na akaụntụ gị maọbụ jikọọ gị na Òreè ahịa. Ọ bụrụ n'ịzụrụ Ihe Onwunwe Dijitalụ n'aka Òreèa iji mezue azụmahịa ahụ, usoro akọwapụtara na Nkebi nke 7.1 Nkwekọrita a ga-adaba.
Ngwaahịa Onyeọzụahịa. Ụta adịghịrị Paxful maka ngwaahịa maọbụ ọrụ ọbụla ị nwere ike ịzụta n'aka Onyeọzụagịa enyere ikike site n'iji akaụntụ gị maọbụ ngwaahịa Paxful Pay. Ọbụrụ na gị na Onyeọzụahịa enyere ikike enwee esemokwu, gị na Onyeọzụahịa Enyere Ikike ahụ kwesiri idozi esemokwu ahụ.
Mnwetara, Nkwụghachi. Mgbe iji Akaụntụ gị zụta ahịa maọbụ ọrụ n'aka ndị ọzọ, ọ bụ nke ikpeazụ. Anyị anaghị edozi nkwụghachi maọbụ mnwetara. Onyeọzụahịa Enyere Ikike nwere ike inye gị mnwetara, chekwaa kredit maọbụ kaadị onyinye site n'iji ekereuche ya dịka ọ dị n'usoro.
Paxful na-agba ụgwọ maka Ọrụ, ụgwọ a ga-egosipụta n'ihu gị tupu ijiri Ọrụ ọbụla nke ịkwụ ụgwọ metụtara. Hụ “Ugwo Paxful” maka nkọwa ndị ọzọ. Ugwo anyị nwere ike ịgbanwe ma Paxful nwere ikikere ịhazigharị ọnụego ya na ụgwọ ya na oge ọbụla.
NRỤRỊTAỤKA AZỤMAHỊA SITE N'USORO MKPEZI NKE PAXFUL
Nrụrịtaụka Azụmahịa. N'ọtụtụ oge, ụzọ kachasị mfe iji dozie esemokwu bụ ka ndị Ọzụụ na ndị Òreè nwee mkparịtaụka, rụkọọ ọrụ ọnụ iji chọpụta ihe merenụ, wee kwekọrịta. Mgbe Ọzụụ na Òreè enweghi ike inwe ike nkwekọrịta, ndị otu nkwado Paxful (“Nkwdo Paxful”) nwere ike inye aka. Onye obula nwere ike ibido usoro mkpezi esemokwu ("arụmụka esemokwu" maọbụ "esemokwu") n'ihe metụtara azụmahịa. Esemokwu nwere ike ịdapụta naanị na azụmahịa nke akara dịka Ọzụụ kwụchagoro ụgwọ ya. Azụmaahịa ndị a na-edeghị akara dịka ndị Ọzụụ, Ndị Ọzụụ kagburu, kagburu ya na-akpaghị aka n'ihi njedebe nke oge edepụtara na ọrire na ọzụzụ ahịa ahụ, agbaghalarị ma kpebie maọbụ ebe Òreè wepụtara Ihe Onwunwe Dijitalụ nye Ọzụụ enweghị ike ịbụ ihe nrụrịtaụka, atụgharịrị, maọbụ gbanwee.
Usoro mkpezi nghọtahie. N'okpuru ebe a bụ usoro Nkwado Paxful na-eso ma ọbụrụ na nghọtahie.
I nwere ike ibido nghọtahie site n'ịbanye na Akaụntụ Paxful gị, mepee azụmahịa ị ga-achọ ịgbagha ma họrọ bọtịnụ "nghọtahie". Bọtịnụ "nghọtahie" ga-egosi naanị ọrụ ma ọbụrụ na akara gosiri na Ọzụụ kwụrụ ụgwọ zuru ezu. Ozugbo ị malitere nghọtahie, ị ga-ahọrọ ụdị nghọtahie site na nhọrọ ndị akọwapụtara ma kọwaa nghọtahie na-akpata nghọtahie gị.
Nhọrọ ndị egosiri maka ịkọwa nghọtahie gị ma ọbụrụ na ị bụ Òreè bụ ndị a:
Mkpọchikọịnụ (ya bụ.Ọzụụ na-azaghị) - Ọzụụ egosila na akwụzuru ụgwọ azụmahịa ahụ, mana anabataghị ya ma ọnaghị arụ ọrụ.
Okwu gbasara Ọkwụkwụụgwọ - Ọzụụ na-arụ ọrụ ma nwaa ịkwụ ụgwọ, mana ọkwụkwụụgwọ ahụ nwere nsogbu.
Ọzọ - nhọrọ mmeghe ebe ị nwere ike ịkọwa ihe butere nghọtahie. Ọzụụ ga-enwe ike ịlele nkọwa gị.
Nhọrọ ndị enyere maka ịkọwa nghọtahie gị ma ọbụrụ na ị bụ Ọzụụ bụ ndị a:
Òreè na-anaghị anabata ozi - ị kwụrụ ụgwọ, mana Òreè anaghị anabata ozi nke ọ na-arụ ọrụ.
Nsogbu ọkwụkwụụgwọ - ị kwụrụ ụgwọ, mana Òreè na-ekwu na enwere nsogbu na ọkwụkwụụgwọ ahụ ma jụ ịhapụ Ihe Onwunwe Dijitalụ.
Ọzọ - nhọrọ mmeghe ebe ị nwere ike ịkọwa ihe butere nghọtahie ahụ. Òreè ga-enwe ike ịlele nkọwa gị.
Ozugbo edozitere nghọtahie, Nkwado Paxful ga-enye ndị ọzọ àmàozi site na imeelu na site na izipu ozi site na atụmatụ mkparịtaụka azụmahịa dị maka ndị Ọzụụ na ndị Òreè nọ n'Ụlọahịa na-eme ka ndị otu a mata na nghọtahie amalitela. Ọ bụrụ na a na-arụrịtaụka banyere azụmahịa gị, Nkwado Paxful ga-agwa gị nke a na-arụ ụka ya na ihe kpatara arụmụka azụmahịa a.
Nyochaa nghọtahie ahụ ma nye Nkwado Paxful nkọwa ihe mere. Gụnye ihe akaebe ọbụla i nwere iji kwado nkọwa gị, dị ka ihe akaebe nke ngosi ọkwụkwụụgwọ, ihe akaebe nke ngosi onwunwe maọbụ akaebe na ịnatago maọbụ na inwetaghị ọkwụkwụụgwọ.
Nkwado Paxful ga-enyocha nghọtahie azụmahịa ma mee mkpebi ga-agbadoụkwụ n'ihe akaebe nke ndị ọzọ nyere. Nkwado Paxful na-edozi nghọtahie site na ịtụle ọtụtụ ihe dị ka akọwara n'okpuru na Nkebi 8.
Nyocha Nghọtahie. N'oge nyocha nghọtahie, Nkwado Paxful nwere ike inye gị ntuziaka ịchọrọ ka ị soro. Ntụziaka a enyere gị nwere ike ịchọ ka ịnye ihe akaebe ndị ọzọ, dị ka nchoputaeziokwu ID ọzọ, ihe akaebe nke ngosi ọkwụkwụụgwọ, foto ọbụla, ụda, maọbụ vidiyo, maọbụ akwụkwọ ọbụla ọzọ weere na Paxful dị mkpa ma nwee ike ịchọ ka ị nye ụdị akaebe a kpọmkwem n'oge enyere. Emezighi ntuziaka nwere ike ibute nghọtahie ahụ egboro gị. Nkwado Paxful ga-enye ọkwa nke mkpebi ya site na njirimara mkparịtaụka azụmahịa n'Ụlọahịa n'ime ụbọchị 30 nke nnata nghọtahie ahụ, mana n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwere ike iwe ogologo oge.
Anaghị azaghachi. Mgbe ị tinyere aka n'azụmahịa, ọ dị mkpa ka ị na-arụsi ọrụ ike ma nọgide site n'oge ebidoro azụmahịa ahụ ruo oge emechara azụmahịa ahụ, kagburu, maọbụ dozie ya. Nke a pụtara na ị ga-enweriri ike ịnye nzaghachi na arịrịọ site na Nkwado Paxful na azụmahịa na-eweta nghọtahie n'ime oge akọwapụtara site na Nkwado Paxful maọbụ enwere ike ịhụta gị dịka onye na-anaghị anabata ya na enwere ike idozi nghọtahie ahụ megide gị.
Nzighachi ego wàyo. Otu nnọkọ nwere ike ịnwe nsogbuga gbadoroụkwụ n'usoro ọkwụkwụụgwọ ejiri banye n'azụmahịa ahụ ọbụrụgodi n'usoro mkpebi nghọtahie nke Paxful chọtara dabaara otù nnọkọ a. Usoro mkpebi nghọtahie akọwapụtara na Nkwekọrita a dị iche na usoro ka mma ọbụla Ọzụụ maọbụ Òreè nwere ike inweta site n'usoro ọkwụkwụụgwọ metụtara azụmahịa. Iwu ejighi Paxful ibido maọbụ mezue nkà wàyo ma ọgaghị akwụ ụgwọ ma ọbụrụ na ndị otù tụgharịa, kwụghachi ụgwọ, maọbụ na nghọtahie azụmahịa site n'ụzọ enyere ndị ọzọ site na usoro ọkwụkwụụgwọ ejiri mee azụmahịa ahụ, gụnyere mgbe emechara nghọtahie ahụ.
Mkpebi nghọtahie. Nkwado Paxful na-edozikarị azụmaahịa butere nghọtahie site n'ibugharị Ihe Onwunwe Dijitalụ gbadoroụkwụ na nghọtahie ahụ Ọzụụ na Òreè ahụ ozugbo usoro mkpebi nghọtahie zuru oke.
N’okpuru ka ahọrọla ọnọdụ ga-enye gị nghọta ka Paxful ga-esi nwee ike dozie nghọtahie pụtara n'azụmahịa. Nke a apụtaghị ịbụ ndepụta zuru ezu. Mkpebi nghọtahie ọbụla ga-emetụta eziokwu ụfọdụ nke nghọtahie ahụ na ihe akaebe ndịọrụ nyere.
Nkwado Paxful nwere ike idozi nghọtahie ka ọ ga-abara Ọzụụ mgbe emejupụtara opekata mpe otu n'ime usoro ndị a:
Ọzụụ akwụọla ụgwọ dịka ntuziaka nke Òreè nyere dịka ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa nke azụmaahịa ahụ ma Ọzụụ enyela ngosi ihe na ọkwụkwụụgwọ gara dịka ntuziaka ndị a si dị. Ọ bụ mmebi nke nkwekọrịta a maka Òreè ịjụ imecha azụmahịa ozugbo Ọzụụ mezuru usoro na ọrịre Òreè dịka ezigara n'oge Ọzụụ nabatara ma kwụọ ụgwọ maka azụmahịa ahụ.
Òreè anaghị anabatazi ozi ya ma hapụkwa ịzaghachi ozi zuru oke n'ime oge Nkwado Paxfuln rịọrọ.
Ọkwụkwụụgwọ bụ nke ana enye ndị ọzọ na azụmahịa ahụ maọbụ ana eme ọkwụkwụụgwọ na akaụntụ ọkwụkwụụgwọ edebanyeghi n'aha Òreè.
Nkwado Paxful nwere ike dozie nghọtahie ka ọ ga-adabara Òreè mgbe emejupụtara otu n'ime usoro ndị a:
Ọzụụ akwụbeghi ụgwọ, enyeghị ọkwụkwụụgwọ zuru ezu maọbụ enyeghị ọkwụkwụụgwọ dịka ntuziaka Òreè ndị izizi nke ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa nke azụmahịa.
E jidere, kwụsịrị, kpọnwụrụ, ọkwụkwụụgwọ Ọzụụ kwụrụ, maọbụ akwụsịrị ọkwụkwụụgwọ site n'aka onye na-akwụ ụgwọ maọbụ onye nhazi. Nke a na-agụnye ọnọdụ Ọzụụ boro ya ebubo maọbụ nwee nghọtahie ọkwụkwụụgwọ site n'ụlọakụ ya maọbụ onye na-eweta kaadị ọkwụkwụụụgwọ.
Ozụụ anaghị anabatazi ozi ya ma hapụkwa ịzaghachi ozi zuru oke n'ime oge Nkwado Paxfuln rịọrọ.
Ọkwụkwụụgwọ bụ nke ndị ọzọ na enye na azụmahịa ahụ maọbụ ana eme ọkwụkwụụgwọ na akaụntụ ọkwụkwụụgwọ edebanyeghi n'aha Ọzụụ.
Ọ bụrụ na Ọzụụ maọbụ Òreè nwere nghọtahie nke azụmahịa nyere ozi aghụghọ maọbụ akwụkwọ aghụghọ maọbụ kwuo okwu ụgha maọbụ na-eji aghụghọ, enwere ike idozi nghọtahie ahụ ozugbo megide onye ọrụ dị otú ahụ ma nwee ike ịkwụsị akaụntụ onyeọrụ dị etu ahụ ozugbo maọbụ Nkwado Paxful ejiri ekereuche ya kwụsị ya.
N'ọnọdụ ụfọdụ ebe onyeotù ọbụla anaghị emezu njirisi ahụ, maọbụ n'ụzọ ndị ọzọ edoghị anya maọbụ na ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta otù ndị mezuru njirisi nghọtahie na Paxful naanị na nghọta zuru oke, Paxful nwere ike kpebie idozi nghọtahie ahụ site n'ikewa Ihe Onwunwe Dijitalụ kpatara nghọtahie dị n'etiti Ọzụụ na Òreè na nhatanha maọbụ n'ụzọ ahaghị.
Irịọ. Ọbụrụ na ị kwenyere na Paxful edozila nghọtahie n'ụzọ na-esoghị Nkwekọrịta a, i nwere ikike ịrịọ mkpesa. Iji rịọ arịrịọ, ịkwesịrị ịgwa anyị ngwa ngwa site na ịkpọtụrụ nkwado ndị ahịa Paxful na-erughị ụbọchị 10 ụbọchị kalenda mgbe amachara ọkwa nke mkpebi Nkwado Paxful enyere gị ma nye anyị nkọwa zuru oke na ihe akaebe na-akwado ikpe gị maka ịrịọ. Mkpesa gị kwesịrị ịkọwapụta otù i kwenyere na Paxful si edozi nghọtahie ahụ na-ezighi ezi dịka usoro nke Nkwekọrịta a ma nye ihe akaebe nke mkpebi ahụ ezighi ezi.
Biko cheta na ma n'oge nghọtahie ahụ maọbụ n'ozuzu oge ọbụla mgbe ị na-eji Ọrụ anyị, iwu ji gị ịkwa ọnụ gị ngá ma kwanyere ndị ọrụ ndị ọzọ ùgwù na Nkwado Paxful. Hụ n'ozuzu, "Nkebi nke 13 - Amachibidoro Iji ya".
Ọgwụgwụ. I kwenyere ma kwenye na mkpebi Paxful banyere nghọtahie bụ nkwubi okwu, nke ikpeazụ ma jikọta dịka akọwara na Nkwekọrịta a. Paxful agaghị enwe ụgwọ nye Ọzụu maọbụ Òreè na mkpebi ya.
ỤGWỌ MAKA IJI ỌRỤ PAXFUL
Imeepụta Obere akpaego bụ n'efu. Paxful na-ana ego maka maka Ọrụ, ụgwọ a ga-egosipụta n'ihu gị tupu ịbanye Ọrụ ọbụla nke gbasara ego. Hụ “Ụgwọ Paxful” maka nkọwa ndị ọzọ. Ego anyị nwere ike ịagbanwe ma Paxful nwere ikikere ịhazigharị ọnụego ya na ụgwọ ya oge ọbụla.
INWEGHI IKIKE ỊKAGBU ỤGWỌ ỌRỤ MAỌBỤ ỤGWỌ NDỊ NGWUPỤTA IHE
Ọ bụrụ na ijiri Ọrụ nke ịkwụ ụgwọ metụtara, maọbụ na ịmalitere azụmahịa na ego ndị ngwuputa ihe site na Ọrụ ahụ, ị gaghị eru eru maka nkwụghachi maọbụ nkwụghachi ụgwọ ozugbo i gosipụtara na ịchọrọ ịga n'ihu Ọrụ maọbụ azụmahịa ahụ.
Anyị nwere ike, na-nzuzo anyị na anaghị gị ego, na maá maọbụ na-amaghị ọkwa na n'oge ọbụla, gbanwee maọbụ kwụsị, nwa oge maọbụ kpamkpam, akụkụ ọbụla nke Ọrụ anyị.
NKWỤSỊ MAỌBỤ ỊKWỤSỊ ỌRỤ & AKAỤNTỤ; NA-MMACHI OHERE ỊBANYE N'OBEREAKPAEGO GỊ
Anyị nwere ike iji naanị ike na ekereuche anyị, mee ihe ozugbo na amaghị ọkwa: (a) kwụsịtụ, machibido, maọbụ kwụsị ohere ịnweta Ọrụ ọbụla maọbụ Ọrụ niile (gụnyere ịmachi ohere ịbanye na obereakpaego gị), na/maọbụ (b) kwụsị maọbụ kagbuo akaụntụ gị ma ọbụrụ na: (i) iwu kwadoro anyị ime nke a, akwụkwọ mkpesa na-arụ ọrụ nke ọma, usoro ikpe ụlọikpe, maọbụ iwu njikọ nke ikike gọọmentị; (ii) anyị na-enyo enyo na ị nwere maọbụ nwee ike imebi iwu a; (iii) iji akaụntụ gị dị n’okpuru ikpe ọbụla, nyocha, maọbụ usoro gọọmentị na/ma ọ bụ na anyị na-ahụ nnukwu ihe egwu nke iwu maọbụ usoro iwu anaghị ekwenye na ọrụ akaụntụ gị; (iv) ndị ọrụ anyị enweghị ike ịkwado gị iji Ọrụ anyị; (v) ị na - eme ihe ọbụla anyị chere dị ka ịgabiga njikwa na usoro anyị maọbụ (vi) anyị chere na ọ dị mkpa ịme nke ahụ iji kpuchido anyị, ndị ọrụ anyị, gụnyere gị, maọbụ ndị ọrụ anyị pụọ n'ihe egwu maọbụ ofufu. Ọ bụrụ na anyị ejiri ikike anyị nwere iji belata maọbụ jụ ịnweta gị na Ọrụ ndị a, anyị agaghị aza ajụjụ maka ihe ọbụla sonyere nke ịjụ ịnye gị ohere inweta Ọrụ ndị ahụ, gụnyere igbu oge ọbụla, mmebi maọbụ nsogbu inwere ike ịta ahụhụ n'ihi ya.
Ọbụrụ na anyị kwụsịtụ maọbụ mechie akaụntụ gị, kwụsị gị iji ọrụ anyị maka ihe ọbụla, maọbụ belata obereakpaego gị, anyị ga-anwa ịnye gị ọkwa ihe anyị mere belụsọ ma usoro ụlọikpe maọbụ usoro iwu ọzọ machibidoro anyị ịnye gị ọkwa dị etú ahụ. IKWENNYERE NA MKPEBI ANYỊ IME IHE ỤFỌDỤGA, GỤNYERE ỊMACHI OHERE, ỊKWỤSỊTỤ, MAỌBỤ IMECHI AKAỤNTỤ MAỌBỤ OBEREAKPAEGO GỊ, NWERE IKE ỊDABERE NA NJIRISI NZUZO DỊ MKPA MAKA USORO NJIKWA IHE EGWU NA NCHEKWE ANYỊ. IKWENYERE NA IWU JI PAXFUL IGOSIPỤTA NKỌWA NJIKWA NKE IHE EGWU YA NA USORO NCHEKWA GỊ. Ọbụrụ na anyị kwụsịtụ akaụntụ gị maọbụ nweta obereakpaego gị, anyị ga-ewepu nkwusioru ozugbo ihe kpatara nkwụsịtụ ọrụ adịkwaghị ọzọ, n'agbanyeghị na anyị enweghị ọrụ ịkọrọ gị oge (ma ọbụrụ na) a ga-ewepu nkwusioru.
Ọbụrụ na I nwere Ihe Onwunwe dijitalụ na Obereakpaego Paxful gị ma enweghi ọrụ ọbụla na akaụntụ gị maka oge nke iwu nyere, anyị nwere ike ịchọ ka anyị kpee ụdị Ihe Onwunwe Dijitalụ ndị a fọdụrụ na akaụntụ gị dịka ihe onwunwe enweghi ikike dịka ihe onwunwe gbapụrụ ma chebe iwu. Ọbụrụ na nke a emee, anyị ga-agbalị nye gị ọkwa edere ede. Ọbụrụ na ịzaghị ọkwa ọbụla dị etu a n'ime ụbọchị azụmahịa asaa (7) iji nata ozi, maọbụ dịka iwu chọrọ, enwere ike ịgwa anyị wepụta ụdị Ihe Onwunwe Dijitalụ ọbụla na ikike ebe o metụtara. Anyị nwere ikike iwepu ego ịnọjụụ maọbụ ụgwọ ọrụ nchịkwa ndị ọzọ na ụdị Ihe Onwunwe Dijitalụ a na-ekwupụtaghị dịka iwu enyere.
Mgbe ị na-abanye maọbụ jiri Ọrụ ndị ahụ, ikwenyere na ị ga-eji Ọrụ ndị ahụ dịka usoro na ọnọdụ dị na Nkwekọrịta a (gụnyere Iwu Nzuzo) ma ghara ime ihe iwu na-akwadoghị, ya na na ị bụ naanị maka omume gị mgbe ị na-eji anyị Ọrụ arụ ọrụ. N'etinyeghi oke ihe niile edepụtara, ikwenyere na ị gaghị eme ya:
jiri Ọrụ anyị n'ụzọ ọbụla nwere ike igbochi, ịkpaghasị, na-emetụta maọbụ gbochie ndị ọrụ ndị ọzọ ịnweta Ọrụ anyị n'ụzọ zuru oke, maọbụ nke nwere ike imebi, mebie, bufee maọbụ mebie ọrụ nke Ọrụ anyị n'ụzọ ọbụla;
tinye aka na ọrụ ọbụla nwere ike imebi, maọbụ nyere aka n'imebi iwu ọbụla, ụkpụrụ, iwu, maọbụ ụkpụrụ, mmemme mmachi a na-eme na mba ebe anyị na-azụ ahịa maọbụ arụmọrụ, maọbụ nke ga-agụnye mpụtara nke iwu ọbụla; bipụta, kesaa maọbụ kesaa ihe ọbụla maọbụ ozi iwu akwadoghị;
igbochi onye ọrụ ọzọ ịnweta maọbụ jiri ọrụ anyị ọ bụla; nkwurụ, mmegbu, ịpụnahụ mmadụ ihe, iyi egwu, na-eyi egwu, maọbụ na-agabiga maọbụ mebie ikike iwu (dịka, mana enweghị njedebe, ikike nke nzuzo, mgbasa ozi na ọgụgụ isi) nke ndị ọrụ ndị ọzọ; kpalie, yie ndị mmadụ egwu, kwalite, maọbụ kwado akpọmasị, enweghị nnabata agbụrụ, maọbụ ime ihe ike megide ndị ọzọ; owuwe maọbụ nakọta ozi sitere na webụsaịt anyị gbasara ndị ọrụ ndị ọzọ;
tinye aka na ọrụ ọbụla nke na-arụ ọrụ wayo, na-emebi aha maọbụ na-akpata mmebi ọbụla nye Paxful maọbụ ndị ọrụ anyị; maọbụ nye ozi Paxful ọbụla na-ezighi ezi, nke aghụghọ maọbụ nke na-eduhie mmadụ maọbụ onye ọrụ ọzọ n'ihe metụtara Ọrụ anyị maọbụ dịka enyere ya maọbụ rịọ ya n'okpuru nkwekọrịta a;
iwebata na Ọrụ ọbụla nje, Trojan, ikpuru, mgbagha bọmbụ maọbụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ; jiri robọtụ, ududo, krọla, skrepa maọbụ ụzọ ndị ọzọ akpaghị aka maọbụ nn.onetiti nke anyị na-enyeghị iji nweta Ọrụ anyị maọbụ wepụ datà; gbalịa igbochi usoro nzacha ọdịnaya ọbụla anyị ji arụ ọrụ, maọbụ nwaa ịnweta ọrụ ọbụla maọbụ mpaghara nke Ọrụ anyị na-enweghị ikike ịnweta; maọbụ itinye ebe ọbụla n'ime Ụlọahịa Paxful nke mgbasa ozi ọbụla maọbụ nkwalite ọbụla nke ga-akwado ịzụ maọbụ ire Ihe Onwunwe Dijitalụ na mpụga nke Ọrụ Paxful;
itinye aka na azụmahịa metụtara ihe na-emebi maọbụ na-emegide ikike nwebisiinkà ọbụla, ụghalaahịa, ikike nke mgbasa ozi maọbụ nzuzo maọbụ ikike ọbụla ọzọ n'okpuru iwu, maọbụ ihe ndị ọzọ nwere ikikere na-enweghị ikike kwesịrị ekwesị n'aka ndị ji ikike; iji ihe ọgụgụisi nke Paxful, aha, maọbụ akara ngosi, gụnyere iji ahịa Paxful maọbụ akara ọrụ, na-enweghị nkwenye ederede n'aka anyị maọbụ n'ụzọ na-agaghị emerụ Paxful maọbụ akara Paxful ahụ; omume ọbụla nke na-egosi nkwado maọbụ mmekọ na Paxful; maọbụ mepụta ngwa ọbụla nke ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'Ọrụ anyị na-enweghị nkwenye ederede anyị; maọbụ
gbaa maọbụ mee ka ndị ọzọ sonye na ọrụ ọbụla a machibidoro n'okpuru Nkebi nke 13 a.
IWUONWE AKARA MMEPỤTA N'ỌGỤGỤISI
Anyị na-enye gị ikike nwere okè, enweghị ike iwepụ, na-enweghị ike ịfefe, dabere n'usoro na ọnọdụ na Nkwekọrịta a, iji nweta ma jiri Ọrụ, Webụsaịt, ya na ọdịnaya metụtara ya, akụrụngwa, ozi (mkpokọta, "Ọdịnaya") naanị maka ebumnuche kwadoro Paxful site n’oge ruo n’oge. A machibidoro ojiji ọbụla nke webụsaịt maọbụ Ọdịnaya na ikike niile, aha, na mmasị na Ọrụ, webụsaịt maọbụ Ọdịnaya bụ naanị nke Paxful. Ikwenyere na ịgaghị akọpị, bufee, kesaa, ree, ikikere, gbanwee injinia, gbanwee, bipụta, maọbụ sonye na mbufe maọbụ ọrịre nke, mepụta ọrụ ndị sitere na, maọbụ n'ụzọ ọbụla na-erigbu Ọdịnaya ọbụla, n'ozuzu maọbụ na akụkụ na-enweghị nkwenye ederede nke Paxful. Inweghị ike detuo, ịkọpịrị maọbụ jiri akara ụghalaahịa Paxful ọbụla, akara e debara aha, akaraga maọbụ akara mmepụta ọgụgụisi ya n’enweghị nkwenye ederede Paxful.
Ọ bụ ezie na anyị bu n’obi ịnye ozi ziri ezi n'oge na webụsaịt Paxful, webụsaịt anyị (gụnyere, na-enweghị njedebe, ọdịnaya) nwere ike ọgaghị abụ nke zuru oke mgbe niile, zuru oke maọbụ ugbu a ma nwee ike ịgụnye ezughị oke teknụzụ maọbụ njehie ederede. Na mgbalị iji nọgide na-enye gị ozi zuru oke na nke ziri ezi dịka o kwere mee, enwere ike ịgbanwe maọbụ emelite ozi site n'oge ruo n'oge na-enweghi ọkwa, gụnyere na-enweghị njedebe ozi gbasara iwu, ngwaahịa na Ọrụ anyị. N'ihi ya, ịkwesịrị inyocha ozi niile tupu ị dabere na ya, mkpebi niile dabere na ozi dị na Webụsaịt Paxful bụ naanị ọrụ gị ma anyị agaghị enwe ụgwọ maka mkpebi ndị dị etú ahụ. Ozi nke ndị ọzọ nyere bụ maka naanị ebumnuche ihe ọmụma ma Paxful anaghị eme nnọchite maọbụ akwụkwọ ikike maka izi ezi ya. Ejikọtara njikọ nke ihe ndị ọzọ (gụnyere enweghị mmachi, webụsaịt) ka ọ dị mma mana ọbụghị anyị na-achịkwa ya. Ikwenyere ma kwenye na anyị enweghị ụta maka akụkụ ọbụla nke ozi, ọdịnaya, maọbụ Ọrụ ndị dị n'ihe ọbụla nke onye atọ maọbụ na saịt ọbụla nke ndị ọzọ nwere ike ịnweta maọbụ jikọọ na Webụsaịt Paxful.
NZIGHACHIOZI NA NNYEFE ONYEỌRỤ
Paxful na-achọ imeziwanye Ọrụ ya na webụsaịt. Ọbụrụ na i nwere echiche maọbụ ntụnye gbasara mmelite maọbụ mgbakwunye na Ọrụ Paxful maọbụ webụsaịt, Paxful ga-achọ ịnụ ha; n'agbanyeghị, nnyefe ọbụla ga-edo onwe ya n'okpuru usoro na ọnọdụ na Nkwekọrịta a.
Ọnweghị ọnọdụ ọbụla nkwupụta nke echiche ọbụla maọbụ nzighachiozi, ọbụla, maọbụ ihe ọbụla metụtara ya na Paxful maọbụ nke ọbụla n'ime ndị enyemaka ya, ndị mgbakwụnye maọbụ ụlọọrụ ndị metụtara, maọbụ ndị isi ha, ndị nhazi, ndị njikwa, ndị otu, ndị nwere òkè, ndị ọrụ na ndị nnọchiteanya, maọbụ nke ọbụla ndị nketa ha, ndị nnọchianya ha, na ndị nyere ha ọrụ (nke ọbụla bụ "Paxful Party" na mkpokọta, na "Paxful Parties") ga-edo onwe ha n'okpuru iwu ọbụla nke nzuzo maọbụ atụ anya ịkwụ ụgwọ.
Site na itinye echiche maọbụ nzighachiozi maọbụ ihe ọbụla metụtara ya nke ga-edo n'okpuru ikike ọgụgụisi ("Ọrụ") na Paxful maọbụ otù Paxful ọbụla, ị na-enye Paxful, n'ihe banyere Ọrụ e nyefere, nke na-abụghị naanị, na-adịgide, zuru ụwa ọnụ ikike niile nke ọdịnaya nke ndị dị etú ahụ echiche na nzighachiozi, maka nzube ọbụla. Ọzọkwa, ị na-ahapụ ikike omume ọbụla n'ụzọ zuru oke enyere n'okpuru iwu Amerịka nke i nwere ike ịnwe na Ọrụ ahụ ma na-anọchite ma na-akwado ndị otù Paxful na Ọrụ ahụ bụ nke gị na mbụ, na enweghi onye ọzọ nwere ikike ọbụla Ọrụ ahụ na ndị Paxful niile enweghị eze ọbụla iji mejuputa Ọrụ ahụ na iji ihe metụtara ya ma ọbụrụ na achọrọ ya, dịka enyere maọbụ dịka ndị otù Paxful gbanwere, na-anataghị ikike maọbụ ikike n'aka ndị ọzọ.
Ịgara n'ihu nabata na Paxful nwere ike inye ikikere ọbụla nke ndị otù Paxful iji mee ihe n'ụzọ ọbụla Ọrụ na ihe ọbụla i nyefere.
Anyị nwere ikike iwepu ọkwa ọbụla ị nwere ike ịme na webụsaịt, na-ekereuche anyị, na-enweghị ịdọ aka na ntị maọbụ ihe kpatara ya.
KA Ị GA-ESI KPỌTỤRỤ ANYỊ
Anyị na-akwado ka ị gaa na Ajụjụ peeji tupu ịkpọtụrụ anyị. Ọbụrụ na Ajụjụ peejienweghi ozi ịchọrọ, Paxful na enye nkwado 24/7. Inwere ike ịkpọtụrụ anyị site na nkwado wijetị anyị dị naAjụjụ peeji.
Anyị agaghị aza ajụjụ maka igbu oge, ọdịda na arụmọrụ maọbụ nkwụsị nke Ọrụ nke na-ebute maọbụ n'ụzọ ọbụla site na ihe ọbụla maọbụ ọnọdụ karịrị njikwa anyị Iwere ezi uche, gụnyere ma ọbụghị nanị na, nnukwu ahịa, ọbụla na-egbu oge maọbụ ọdịda n'ihi ọrụ ọbụla nke Chineke, omume nke ndị isi obodo maọbụ ndị agha, omume nke ndị na-eyi ọha egwu, ọgbaaghara obodo, agha, iku maọbụ nghọtahie ọrụ ndị ọzọ, ọkụ, nkwụsị na nkwukọrịta maọbụ ọrụ ntaeneti maọbụ ọrụ ndị na-eweta netwọọkụ, ọdịda nke akụrụngwa na / maọbụ ngwanrọ, ọdachi ndị ọzọ maọbụ ihe ọbụla ọzọ. Nke karịrị njikwa eziuche anyị ma ọgaghị emetụta ndaba na ịmanye nke ndokwa ọbụla fọdụrụnụ.
ỤDỊ NKE NKWEKỌRỊTA
Nkwekọrịta a metụtara nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na Paxful n'ihe gbasara isiokwu nke usoro na nkwekọrịta a na nkwekọrịta a kagburu ma dochie nghọta na nkwekọrịta ọbụla dị n'etiti gị na Paxful n'ihe gbasara isiokwu ahụ. Ịgaghị ekenye onye ọbụla ikike nke gị maọbụ ọrụ n'okpuru Nkwekọrịta a na-enweghị tupu e dee nkwenye anyị.